Al-Shabaab oo weerar hoobiyeyaal ah ku qaaday saldhiga ciidamada Jabuuti ee AMISOM. – iftiin fm
Al-Shabaab oo weerar hoobiyeyaal ah ku qaaday saldhiga ciidamada Jabuuti ee AMISOM.
June 29, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Weli lama oga khasaaraha ka dhashay hoobiyeyaashaas oo la sheegay inay gaarayeen ilaa lix, kuwaas oo dadka Belewyene qaarkood ay sheegeen inay dareemeen cabsi ballaaran.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada AMISOM dhankooda ay ku jawaabeen tio hoobiyeyaal ah,kuwaas oo la sheegay in aysan geysan wax khasaaro ah,waxaana xigay howlgal ay sameeyeen Ciidamada Jabuuti oo ka tirsan AMISOM.
← Real Madrid oo guul muhiim ah ka gaartay kooxda Espanyol .
RASMI: isku aadka afar dhammaadka ama Semi-finalka FA Cup-ka. →